Portofolio tsara 10 vita amin'ny Cargocollective ary fanasana 4 maimaim-poana | Famoronana an-tserasera
Lua louro | | Graphic Design, Inspiration
Rehefa manao ny portfolio amin'ny Internet manana sehatra marobe izahay. Iza no hisafidy? Ny tolo-kevitro dia ny manandrana azy rehetra ianao, manafangaro azy ireo ary tazomy ilay tianao indrindra: ho an'ny fanamorana ny fanaingoana, ho an'ireo modely misy, ho mora mora ny manavao ...
Iray amin'ireo sehatra tsara indrindra hanao izany dia Cargocollective. Raha efa te hiditra ianao dia ho tsapanao fa ilaina ny fanasana hamoronana portfolio anao. Tsara vintana ianao! Nanapa-kevitra ny hanome anao ny fanasana efatra napetrako tamin'ny mpamaky efatra voalohany amin'ity lahatsoratra ity ianao.
Portigio famolavolana, sary ary sary tsara
Ny teny majika amin'ny portfolio tsara: mora fitetezana, vaovao mazava sy fohy ary ny fisafidianana ireo sanganasa tsara indrindra. Matetika izahay te-hanao portfolio mamirapiratra miavaka, zava-baovao izany amin'ny endriny… Saingy adinontsika fa ny tena zava-dehibe dia ny atiny. Raha tsy fandaharana milina ianao, mamolavola sy mivoatra, angamba ny safidinao tsara indrindra dia ny sehatra famoronana portfolio.
Ity misy lisitr'ireo portfolio tsara 10 vita amin'ny Cargocollective izay afaka manome aingam-panahy anao ary mampiseho aminao izay azonao atao.
Raha ny amin'ny ny fanasana- URL iray ihany ho an'ny olona tokana. Noho izany, raha tsindrio ny rohy iray ary tsy mety aminao, dia midika izany fa nisy olona iray haingana noho ianao, noho izany dia mamporisika anao aho hiverina amin'ny paositra ary hanandrana adiresy hafa. Rehefa mampiasa azy ianao dia mangataka anao aho hametraka hevitra milaza izany mba hanidiana ny lahatsoratra ary hampandre fa efa lany ny fanasana.
Mariana garcia: Mpamorona sary amin'ny alàlan'ny fampiofanana, mpaka sary meksikana amin'ny asany. Miatrika portfolio madio izahay, miaraka amina sary miavaka eo amin'ny lohateny. ny tokana iraisana iraisana mankany amin'ny portfolio hafa, "about". Avy eo izy dia mampifandray amin'ilay magazine niarahany niasa, ny Tumblr ary ny bilaoginy (rohy ivelany daholo ireo). Ny atiny atolotra ao amin'ny cargocollective dia voasokajy ho "tantara", "fampielezan-kevitra", "portratis" ary "tsy olona", fomba iray handaminana ny asanao. Araka ny hitanao dia novidiana ny domain .org
Atelier Dyakova- Mpanamboatra sary sy talen'ny zavakanto any Londres. Tamin'ny voalohany dia nahagaga ahy izany ny menio fitetezana dia napetraka ho tsanganana eo amin'ny ilany ankavanan'ny efijery. Hita ao amin'ny pejy voalohany amin'ny maha-bilaogy ny atiny, fa raha tsindrio ireo sokajy ao amin'io menio io dia handeha amin'ny atiny manokana isika (fampahalalana momba azy, loka, famoahana, famoahana gazety ...). Tsy tiako ny typography, ary tsy tiako ny rohy manaraka (10) izay mampiavaka ny Cargocollective. Ho fanampin'izany, ny mpanoratra dia tsy nikarakara ny favicon an'ny tranokalany, izay mitovy amin'ny an'ny sehatra.
Mike Deal: mpamorona sary sy mpamorona tranonkala. Ny atiny no zava-dehibe: tsy misy fanelingelenana, ny sary mifanaraka amin'ny tetikasa tsirairay dia nalamina teo amin'ny efijery. Ny fizarana "About" ihany no azonao zahana, Irery ihany manerana ny tranonkala, voalamina eo akaikin'ny lohateny misy ny sary famantarana anao.
Gloria Marigo: mpaka sary. Portfolio izay eo amin'ny lafiny mifanohitra amin'ilay teo aloha noho ny azy sokajy maro (samy mifanitsy amin'ny lohatenin'ny tetikasa). Raha mikorisa isika dia ny faritra afovoan'ny tranonkala ihany no ahodinantsika, mamela ny sisin'ny ankavia hajanona foana. Raha ny ahy, satria manana efijery 13 "aho dia tsy mahazo aina izany satria tapaka ireo faritra ary tsy hitako izy rehetra (tadidio foana ny maha-zava-dehibe ny valin'ny portfolio).
Voasary sy kanelina- Studio misy marika kely misy any Singapour. Eo ambanin'ny sary famantarana izay manome satroboninahitra ny portfolio dia ny lohatenin'ny tetikasa tsirairay, ho fanampin'ilay fizarana momba. Eo ambanin'ity karazana menio ity ireo sary izay mifanaraka amin'ny tetikasa tsirairay. Na tsindrio azy ireo na eo amin'ny menio dia ho tonga amin'ny famaritana amin'ny antsipiriany momba ny asa tsirairay ianao.
Sean McClintock: Mpamorona sary sy mpanao sary mihetsika avy any New York. Raha tokony apetraka ny faritra ao amin'ny portfolio-ny (izay misy roa, "About" ary "Blog") dia namorona sary roa izy araho ny sary famantarana amin'ny endriny sy ny loko, mba tsy hifandona. Raha mandeha mitsivalana isika dia afaka mahita ny sary rehetra mifanaraka amin'ny asan'izy ireo.
Simon Alibert: Mahagaga raha ny fahitana azy, ato amin'ity tranonkala ity tsy hahita sary famantarana izahay. Tsy lohateny, toa izany. Ny menio fitetezam-boaloboka natao tamina lahatsoratra lehibe fotsiny izay misy fizarana roa, izay manasokajy ny asan'ny sary, ary ny fahatelo antsoina hoe "About". Io ihany no toerana ahitantsika ny anaran'i Simon Alibert, ankoatry ny sehatra: mpamorona sary UX sy mpaka sary amateur.
Merijn Hos: mpanao sary sy mpahaikanto. Portfolio miaraka amin'i tetikasa maro. Manaitra ahy fa ny anarana sy ny sokajy dia tsy mitovy amin'ny habe, ny loko, ny fametrahana azy ...
Mauro gatti: mpanao sary. Miarahaba antsika izy a hafatra mahafinaritra ao amin'ny lohateny. Ny fitetezana dia tena mitovy amin'ny portfolio taloha.
iamalwayshungry: Studio famoronana hita any New Orleans. Miorina maizina amin'ny fandraisana azy dia manjaka ny maha-zava-dehibe ny sary. Raha hivezivezy amin'ny sarin'ny tetikasa tsirairay dia tsy maintsy mampiasa ny zana-tsipìka eo amin'ny fitendry isika.
Fanasana maimaim-poana any amin'ny Cargocollective:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Portfolio tsara 10 vita amin'ny Cargocollective ary fanasana 4 maimaim-poana
mariaagua dia hoy izy:
Misaotra betsaka, ny famelana ireo fanasana dia antsipiriany ary tena manome aingam-panahy ny lahatsoratra.
Mamaly an'i mariaagua
Misaotra anao marriaagua, faly aho fa nanome aingam-panahy anao ity lahatsoratra ity. Raha mampiasa fanasana ianao dia tsarovy ny milaza azy eto, mba hahafahanao "miampita" (ny fanasana tsirairay dia ampiasaina tokana).
Okay! Nampiasa ny laharana faha-3 aho
Perrfect, rohy niampita. Manantena aho fa hifanaraka amin'ny Cargocollective! ;)
Ataoko fa tsy manana fanasana sisa ianao, sa tsy izany?
Fito, efa nanandrana ireo fanasana 3 tsy voailika ve ianao? Amin'ny fitsipika dia tokony misy izy ireo.
Tsy miasa izy ireo. Nisy nanadino nisaotra anao ... misaotra anao ihany aho!
Hanohy hamaky amin'ny fotoana manaraka izahay.
Arahabaina ao amin'ny bilaogy, nihatsara be izany hatramin'ny andro voalohany namakiako anao!
Nahamenatra tokoa ... Amin'izao fotoana izao dia tsy manana fanasana intsony aho. Raha mahazo aho dia mampanantena ny hanitsy ny lahatsoratra ary hampandre ahy ny hevitro.
Misaotra! Betsaka izahay no manoratra ary faly izahay mamaky ireo zavatra ireo.
Mihobia ho an'i Beijing;)
Misy olona afaka manasa ahy ho any amin'ny cargocollective, misaotra betsaka
Mamaly an'i marcos gonzalez
Salama varotra tsara, azonao atao ve ny mandefa fanasana ho an'ny cargocollective? Misaotra betsaka